China PVC/PU coated steel ဝါယာကြိုးကြိုး 3mm 4mm စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Bangyi
အီလက်ထရွန်းနစ်အချိန် ကယ်လိုရီကောင်တာဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ရေတွက်ခြင်း
လက်ကိုင်အရွယ်အစား 180x30 မီလီမီတာ၊ ကိုင်ရအဆင်ပြေသည်။ကြိုးခုန်နေစဉ် လက်ကိုင်ကို မြဲမြံစွာ ကိုင်ထားနိုင်စေမည့် ချော်လဲမှုမရှိသော ဒီဇိုင်း၊Weight load design handles သည် သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကို ပိုမိုထိရောက်စေသည်။
ပစ္စည်း PVC ဝါယာကြိုး+ABS+ကောင်တာ
ကြိုးအရွယ်အစား 0.45 စင်တီမီတာ * 300 စင်တီမီတာ
ကြိုးအရောင် အပြာ၊ အစိမ်း၊ ပန်းရောင်
ရွေးချယ်မှု ကြိုး၊ ကြိုးမဲ့
အလေးချိန် 130 ဂရမ်
အထုပ် opp အိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသော 1 PC ကို;ထို့နောက် caron တွင် 100 pcs
အီလက်ထရွန်းနစ် ခုန်ကြိုးခုန်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အချိန် ကယ်လိုရီကောင်တာဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး၊ ကလေးများအတွက် ကြိုးခုန်ခြင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်း ပြင်ပ အားကစား ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း
လက်ကိုင်အရွယ်အစား 180x30 မီလီမီတာ၊ ကိုင်ရအဆင်ပြေသည်။
ကြိုးခုန်နေစဉ် လက်ကိုင်ကို မြဲမြံစွာ ကိုင်ထားနိုင်စေမည့် ချော်လဲမှုမရှိသော ဒီဇိုင်း၊Weight load design handles သည် သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကို ပိုမိုထိရောက်စေသည်။
Dual mode ကြိုး-
အရှည်3m/ 9.8 ပေ ကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် 24 စင်တီမီတာ/ 9.4 လက်မ အတိုကြိုး နှစ်ခုပါရှိသည်။ကြိုးအရှည်ကို မင်းရဲ့အမြင့်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ကြိုးက အလွယ်တကူ ခလုတ်မတိုက်မိဖို့ သေချာစေတယ်။TPE ဘောလုံးများပါသောကြိုးအတိုများသည် ကြိုးမဲ့ခုန်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော၊ ကလေးများအတွက် ဘေးကင်းပြီး ပိုမိုလွယ်ကူကာ နေရာအလွန်အကျွံမယူဘဲ အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေကာ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
အီလက်ထရွန်းနစ် ဘက်စုံသုံး ကြိုး-
ဤကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုးပေါ်ရှိ HD LED မျက်နှာပြင်သည် အချိန်တိုင်း၊ အလေးချိန်၊ ကယ်လိုရီနှင့် စက်ဝိုင်းများကို ပြသသည်။၎င်းသည် သင်၏သတ်မှတ်အလေးချိန်၊ အချိန်ရေတွက်ခြင်း၊ သင်ခုန်ချခဲ့သော စက်ဝိုင်းအရေအတွက်နှင့် သင်အတိအကျလောင်ကျွမ်းသွားသော ကယ်လိုရီများကို အတိအကျဖော်ပြသည်။သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းပစ်မှတ်ကိုအောင်မြင်ရန် အချိန်သတိပေးချက် သို့မဟုတ် စက်ဝိုင်းခုန်သတိပေးချက်ကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်ထားသည့် တိကျသော သံလိုက်ကောင်တာသည် သင့်ခုန်နံပါတ်ကို တွက်ချက်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် သင်စားသုံးသည့် ကယ်လိုရီများကို တွက်ချက်နိုင်သည်၊ သို့မှသာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်အတွင်း ရရှိလာသော ဒေတာကို သင်နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော PVC ကြိုးသည် တာရှည်ခံပြီး သွက်လက်ပြီး ရောယှက်ခြင်းနှင့် ကောက်ကောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆို ကြိုးဖြင့် ခုန်နိုင်သည်။
(1) opp အိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုးပြီးနောက် 100 pcs ပုံတ္တား
(၂) ပျဉ်ချပ်များ သို့မဟုတ် သစ်သားအိတ်များတွင် ထည့်ပါ။
(၃) သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ထုပ်ပိုးခြင်း။
သင်၏နမူနာအမှာစာအတွက် နိုင်ငံတကာအမြန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပါသည်- TNT၊ DHL၊ FedEx၊ UPS၊ EMS၊ စသည်တို့ကဲ့သို့ပင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအပြားမှာယူမှုကို ပင်လယ်၊ ရထားဖြင့် စသည်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုအချိန်: 7-15 အလုပ်လုပ်ရက်
1. ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုကို ကုန်သွယ်မှုနှင့် အရောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ကျွန်တော်တို့မှာ ဆယ်နှစ်ကျော် သမိုင်းရှိတယ်။ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးစွမ်းနိုင်သည့် ရင့်ကျက်သောအရောင်းစနစ်တစ်ခုရှိသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ISO ၊ CE ၊ SGS အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် လိုအပ်သော အရွယ်အစားနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ထုတ်ကုန်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲကာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်းကို လက်ခံပါသည်။
ယခင်- စိတ်ကြိုက် လေ့ကျင့်ခန်း Gym လေ့ကျင့်ခန်း လေ့ကျင့်ရေး ကြံ့ခိုင်မှု အကြီးစား သံမဏိကြိုး ဝိုင်ယာ အသီးအနှံ အလေးချိန် ခုန်ကူးကြိုး ချိန်ညှိနိုင်သော အမြန်နှုန်း ခုန်ကြိုး
နောက်တစ်ခု: လွယ်ကူသောသော့ခတ်ထားသော အမြန်နှုန်းဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်သော သံမဏိကြိုး ခုန်ကြိုးခုန်ကြိုးများ အားကစားရုံ လေးလံသော သံမဏိကြိုးကြိုး ကြိုးခုန်ခြင်း
ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး, ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။, ropeless skip ကြိုး, ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး, ကြိုးခုန်ဝယ်,